HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
MARO no mahalala fa nanana apostoly 12 i Jesosy. Mety ho gaga anefa ny olona raha ilazana fa nisy vehivavy koa ny mpianatr’i Jesosy ary nifandray akaiky taminy izy ireny. Mpianany, ohatra, i Johana.—Mat. 27:55; Lioka 8:3.
Nanohana an’i Jesosy izy nandritra ny fanompoany. Inona no nataony tamin’izany ary inona no azontsika ianarana avy aminy?
IZA I JOHANA?
“Vadin’i Koza, mpiandraikitra ny tao an-tranon’i Heroda” i Johana. Nety ho mpanara-maso ny raharaha tao an-tranon’i Heroda Antipasy i Koza. Anisan’ireo vehivavy maromaro nositranin’i Jesosy i Johana. Niara-nandeha nitory tamin’i Jesosy sy ny apostoliny izy sy ireo vehivavy ireo.—Lioka 8:1-3.
Nampianarin’ny mpitondra fivavahana jiosy fa tsy tokony hifandray amin’ny lehilahy tsy havany ny vehivavy, sady tsy mahazo manao dia lavitra miaraka aminy. Tsy nahazo niresaka be tamin’ny vehivavy mihitsy aza ny lehilahy jiosy. Navelan’i Jesosy hiaraka taminy anefa i Johana sy ireo vehivavy hafa nino azy.
Natahorana hailikiliky ny fiaraha-monina i Johana noho izy niaraka tamin’i Jesosy sy ny apostoly. Tsy maintsy nanova ny fanaony andavanandro koa izy sy izay rehetra nanaraka an’i Jesosy. Hoy i Jesosy momba an’ireny mpanara-dia azy ireny: “Ireto mihaino sy mankatò ny tenin’Andriamanitra ireto no reniko sy rahalahiko.” (Lioka 8:19-21; 18:28-30) Mampahery tokoa ny mahalala fa tena tian’i Jesosy ireo mahafoy tena mba hanara-dia azy.
NAMPIASA NY FANANANY HIKARAKARANA NY HAFA IZY
“Nampiasa ny fananany” hikarakarana an’i Jesosy sy ny apostoliny i Johana sy ny vehivavy maro hafa. (Lioka 8:3) Hoy ny mpanoratra iray: ‘Tsy resahin’i Lioka hoe nahandro sakafo ireo vehivavy ireo na nanasa vilia na nanjaitra ny rovitra. Mety ho nanao an’izany ry zareo nefa tsy izany no nolazain’i Lioka.’ Angamba izy ireo nanome vola na zavatra hafa mba hanampiana an’i Jesosy sy izay niaraka taminy.
Nisy 20 teo ho eo no niaraka tamin’i Jesosy rehefa nitety tanàna nitory izy. Tsy niasa mba hahazoam-bola anefa izy sy ny apostoliny, ka nety ho tsy nanam-bola ampy hiantohana ny sakafo sy ny zavatra hafa nilain’izy ireo. Mety ho nisy nampiantrano azy ihany, nefa tsy nanantena an’izany izy ireo matoa nitondra “boatim-bola.” (Jaona 12:6; 13:28, 29) Nety ho nanao fanomezana mba hisahanana ny lany àry i Johana sy ny vehivavy hafa.
Misy olona tsy manaiky hoe nanana vola na fananana ny vehivavy jiosy. Hita tamin’ny asa soratra tamin’izany anefa fa tena nisy vehivavy jiosy nanana vola na fananana. Angamba izy 1) nandova avy tamin’ny rainy satria tsy niteraka lahy ny rainy, na 2) nomen’olona fananana, na 3) nisara-panambadiana ka nahazo ny anjara fananany, na 4) nandova tamin’ny vadiny, na 5) niasa.
Azo inoana fa samy nanao izay azony natao mba hisahanana ny lany ireo mpanara-dia an’i Jesosy. Mpanankarena angamba ny vehivavy sasany nanara-dia azy. Misy mihevitra fa mpanankarena i Johana satria mpiandraikitra ny tao an-tranon’i Heroda ny vadiny. Izy angamba no nividy an’ilay akanjo tsy nisy zaitra nanaovan’i Jesosy. Lafo vidy mantsy ny akanjo toy izany. (Jaona 19:23, 24) Nilaza ny mpanoratra iray fa ‘tsy hahavidy an’izany raha vadin’ny mpanarato.’
Tsy miresaka mivantana ny Baiboly hoe nanome vola i Johana mba hanohanana an’i Jesosy. Nanao izay azony natao anefa izy. Inona no ianarantsika avy amin’izany? Isika ihany no mahita hoe inona no homentsika mba hanohanana ny asan’ilay Fanjakana. Miankina amintsika koa na hanome isika na tsia. Ny zava-dehibe amin’Andriamanitra dia hoe manao an’izay azontsika atao isika ary faly manao an’izany.—Mat. 6:33; Mar. 14:8; 2 Kor. 9:7.
TSY NIVADIKA TAMIN’I JESOSY IZY
Toa nahita ny namonoana an’i Jesosy i Johana. Nety ho teo koa ireo vehivavy hafa “izay samy nanaraka an’i Jesosy ka nikarakara azy fony izy tany Galilia, mbamin’ny vehivavy maro hafa koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema.” (Mar. 15:41) Rehefa nesorina teo amin’ny tsato-kazo ny fatin’i Jesosy mba halevina, dia “nanaraka tao aoriana koa ireo vehivavy izay niaraka taminy avy tany Galilia, ka nijery ny fasana sy ny fomba nametrahana ny fatin’i Jesosy. Dia nody izy ireo mba hanomana zavamaniry mani-pofona sy menaka manitra.” Nilaza i Lioka fa “i Maria Magdalena sy Johana ary Maria renin’i Jakoba” ireo vehivavy ireo. Niverina tany am-pasana izy ireo taorian’ny Sabata ary nisy anjely nilaza taminy fa efa natsangana i Jesosy.—Lioka 23:55–24:10.
Nanao izay azony natao ho an’ny Tompony i Johana sy ny vehivavy hafa
Azo inoana fa anisan’ireo mpianatra nivory tao Jerosalema tamin’ny Pentekosta taona 33 i Johana. Tao koa ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny. (Asa. 1:12-14) Misy fanazavana momba an’i Heroda Antipasy tsy hita afa-tsy ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka ary mety ho i Johana no nitantara an’izany tamin’i Lioka. Niasa tao amin’i Heroda mantsy ny vadin’i Johana. Tsy izay ihany fa i Lioka irery no mpanoratra Filazantsara nanonona ny anaran’i Johana.—Lioka 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.
Mampisaintsaina antsika ny tantaran’i Johana. Nanohana an’i Jesosy araka izay vitany izy. Azo antoka fa faly erỳ izy raha nahasoa an’i Jesosy sy ny apostoliny ary ny mpianatra hafa ny volany, tamin’izy ireo nitety tanàna nitory. Nikarakara an’i Jesosy i Johana ary tsy nivadika taminy na nisy fitsapana aza. Modely ho an’ny vehivavy kristianina izy.